Shina, Filipina: Mihenjana Ny Tadin-dokanga Momba Ny Fiandriananm-pirenena Ao Scarborough Shoal · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Mey 2012 8:18 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Filipino, Italiano, Français, Español, English
Niakatra ny maripàna eo amin'ny fifanolanan'i Shina sy Filipina momba ny fifandroritana ny fari-dranon'i Scarborough Shoal na ny Nosy Huangyan, miaraka amin'ny filazan'ny fampahalalam-baovao eo ambany fitantanan'ny fanjakàna Shinoa izay niteny fa tsy afaka ny handefitra intsony i Shina amin'ny fisian'ireo sambo mpiady avy any Filipina ao amin'ny fari-dranomasina atsimon'i Shina.
Ny fanamarihan'ny China Daily tamin'ny 8 May 2012, dia nampibaribary [zh] tao amin'ny lohateny vaventiny fa i Shina “dia tsy afaka ny handefitra ny tsy azo leferina intsony ” manoloana ny olana Scarborough Shoal ary io dia nampiseho fa ny tetikady diplaomatikan'ny governemanta Shinoa dia mety ho fanehoan-kery amin'ny maha-tany manana ny fiandrianany azy amin'ny fari-dranomasina atsimon'i Shina.
Ny matoandahatsoratry ny famoaham-baovao Nasionalista Shinoa, Global Times‘ tamin'ny 9 May dia niteny fa [zh] “fahagagana raha toa ka tsy hiafara aminà fifandonana ara-tafika ny fifanatrehana”.
Nitatitra koa ireo gazety any an-toerana fa ny sambo mpiady Shinoa dia nandroaka [zh] Filipiana mpanjono hiala tao Shoal. Nipoitra ny fanehoan-kevitra nasionalista ho setrin'ny fangatahan'ny manampahaizana ara-tafika [zh] Filipiana fa hoe tsy tokony hiditra amin'ny fampiasana hery ara-miaramila i Shina ho famahana, na izany ny olan'ny Scarborough Shoal, na ny raharaha an-tokantranony, ny nasionalisma Shinoa ety anivon'ny aterineto
Ny hetsika farany indrindra momba ny fiandrianam-pirenena dia niseho niaraka tamin'ny fitsanganan'ny sainam-pirenena Shinoa teny ambonin'ny harambato lehibe tao Scarborough Shoal nataonà mpanadihady iray avy amin'ny fahitalavitra Dongfan Star :
Tondraky ny fihetseham-po nasionalista ny media sosialy Shinoa raha ny teny hoe “黃岩島” (Huangyan Island) no karohana, ary vao mainka nanampy trotraka nandrehitra ny afo ireo fampahalalam-baovao Shinoa mahazatra. Ity ambany ity ny fantina tamin'ireo fanehoan-kevitra sasany tao amin'ny Weibo momba ilay olana:
@周指辉 [zh]: Toa sahala amin'ny ho azon'ny firenentsika ihany n y fifehezana ireo Nosy Huangyan. Fotoana voalamena izao, antenaiko fa ho azontsika hatramin'ny fifehezana ireo nosy hafa ihany koa.
@醉想丽华 [zh]: Midadasika be ny faritry ny tany Shinoa, saingy na ny indray mandingana aza dia masina daholo. Tsy misy fifanarahana azo atao raha resaka olana momba ny faritry ny tany izany, ny ady ihany no hany mahavaha ny olana. Mila mandray nyfitaovam-piadiantsika sy mivonona isika. Vatany vao misy manindritsindry antsika, tsy maintsy mamaly bontana isika. Isanandro, tsy mitsahatra ny miteny ny fampahalalam-baovao fa faritra iray tafiditra tanteraka ao anatin'i Shina i Huangyan, tena manahirantsaina io… voatsindritsindry foana isika ary dia manohy ny miresaka. Mila mampioseho loka hafa isika mba tsy hitsapatsapan-dry zareo ny herintsika.
@黑匣子陈廖宇 [zh]: Ny olan'ny Huangyan dia hetsika famantarana ho an'ireo firenena maro samihafa mba hamokisany ny hetahetan-dry zareo [ara-politika sy nasionalista]. Tsaratsara kokoa ho azy araka izany ny tsy famahàna ny olana.
@佳琦-半正太V [zh]: Nahay nandanjalanja tsara i Shina tamin'ny fiatrehana ny olan'ny fari-dranomasina atsimon'i Shina. Saingy nakorontan'i Filipina ny olan'ireo Nosy Huangyan. Heveriko fa azontsika atao ny manadrana ny antsintsika ary mijery raha azontsika atao koa ny manome fampitandremana an'i Vietnam sy Japana.
Fomba fandiniky ny mpiasan'ny fampahalalam-baovao
Su Shaoxin [zh], mpiasa aminà fampahalalam-baovao ao Guangzhou dia mitsikera ireo mpampahalala vaovao mandrehitra ny toe-po nasionalista:
Amin'ny maha mpiasan'ny fampahalalam-baovao sy endrika fantatr'olona antsika, mety hahazo tehaka avy amin'ny tseana isika ary hisitraka ny maha zaza hendry ara-politika amin'ny fanondrahana menaka eo ambonin'ny afon'ny teo-po nasionalista amin'izao fotoana izao. Kanefa, ny toe-po mampivady ny lanja ara-tsain'ny hetsika ho amin'ny tombontsoan'ny maro toy izany dia mety hitondra zava-doza ho an'ny firenena ary ianao [angamba manondro ireo mpiasan'ny fampahalalam-baovao ela nihetezana kokoa] dia tsy maintsy hizaka hirifiry [bebe kokoa] noho ny tenako. Te-hiteny aho hoe misy tsy fahampian'ny fahalalana sy ny fahaizana mitantana ilay olana [Huangyan] — satria tsy ilaozan'ny tsy fahamatorana sy tsy fahaiza-manavaka, misy ihany koa ny drafitra miafina [any ambadik'ireo tatitra sy fanehoan-kevitra]